Akụkọ - PCB Jikọọ: Mmetụta na ọnụ ahịa PCB n'oge ọrịa na-efe efe
Jikọọ PCB: Mmetụta na ọnụ ahịa PCB n'oge ọrịa na-efe efe
Ka ụwa na-emeziwanye mmetụta nke ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ, enwere ma ọ dịkarịa ala ihe ụfọdụ enwere ike ịdabere na ya ka ọ nọgide na-adịgide adịgide.
Akụ na ụba China gbalịsiri ike na mmalite nke ọrịa a, agbakeela nke ọma, ebe ọrụ nrụpụta China abawanyela maka ọnwa nke itoolu kwụ ọtọ dịka National Bureau of Statistics si kwuo.
Mmepụta maka ụlọ PCB nke China ugbu a karịrị iwu mbupụ n'ọtụtụ ụlọ nrụpụta yana yana mmụba ọnụahịa na akụrụngwa karịa 35% n'ọnọdụ ụfọdụ, ndị na-emepụta PCB dị njikere ugbu a ịnyefe ndị ahịa ego ndị a abawanyela, nke ha na-asọ oyi ime n'oge Usoro mmalite nke ọrịa na-efe efe.
Ka iwu mbupụ na-amalite ibuli ikike dị na-aga n'ihu na-ebelata itinyekwu nrụgide na ụdọ ọkọnọ ihe, na-ekwe ka ndị na-emepụta akụrụngwa na-ana ego ọzọ.
Ọlaedo ka bụ ogige zuru ụwa ọnụ na ejighị n'aka akụ na ụba ụwa, yana ọla dị oke ọnụ ahịa na-agbago n'ọkwa dị elu nke akụkọ ihe mere eme, arụmọrụ ejirila okpukpu abụọ karịa ọnụ ahịa ọla n'ime afọ 5 gara aga.
Ọnụ ego teknụzụ PCB anaghị alụso ọrịa ọgụ, yana ọnụ ahịa imecha elu ENIG abawanyela n'ofe teknụzụ niile, mmetụta nke mmụba ndị a na-enwe mmetụta karịa n'ofe ọnụ ahịa oyi akwa dị ala ka% nke mmụba na-adaba na ọnụ ọgụgụ nke ọkwa.
A na-enwetakwa ọsọ ọsọ nke akụ na ụba China n'ofe ụwa, na dollar US na-ebelata 6% megide RMB kemgbe Jenụwarị 2020. Ụlọ ọrụ PCB na-ekpughe dollar site na billables ga-ewere nsụgharị ego mba ọzọ kụrụ ka ụgwọ ọrụ ha na-akwụ. akwụ ụgwọ na ego mpaghara.
Site na mmụba nke akụrụngwa nwere ike ịga n'ihu ruo mgbe Afọ Ọhụrụ nke China yana mmụba na-aga n'ihu na ngwa ahịa azụmaahịa zuru ụwa ọnụ, ahịa ugbu a erutela ebe ọnụ ahịa mmepụta PCB na-abawanye na ọkwa nke na-agaghị adịgide maka ụlọ nrụpụta nwere.
Oge nzipu: Jan-05-2021